July 8, 2008, 4:48 pm Filed under: E-Books, Essays And Stories ဒီလ (၇)ရက်နေ့အတွက်တော့ အဆက်ဟောင်း ၊ အချစ်ဟောင်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်၍ ဖြစ်တတ်သည့် ပြဿနာအချို့ကို ဖော်ပြထားသော ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် .. ။ အဆက်ဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အချစ်ဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် .. ထိုသူတွေနဲ့ပတ်သတ်လာရင် အနည်းနှင့်အများ သ၀န်တိုကြ ၊ မကြိုက်ကြတာ လူ့သဘာဝပါပဲ .. ။ မည်သူမျှ ထိခိုက်နစ်နာခြင်း မရှိကြဘဲ စုံတွဲတိုင်း အဆင်ပြေစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ စာရေးဆရာမ မိုးမိုး(အင်းလျား)ရဲ့ စံနမူနာ ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို မျှဝေခံစားပေးလိုက်ပါတယ်။ ပို့စကတ်လေးတစ်စောင်
I also keep getting postcard from my ex-bf. Lucky I am not married yet😛
July 9, 2008 @ 5:04 am Reply	လင်းလက်ရေ…၀တ္ထုကောင်းလေး ဝေမျှပေးတာကျေးဇူးပါ… ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားတတ်အောင် ပညာပေးပုံလေးက တကယ်လှတယ်… ညီမရေးတဲ့ အချစ်အကြောင်းလေးတွေ မဖတ်ရတာကြာပေါ့…ရေးပါဦး….
Comment by တန်ခူး
July 11, 2008 @ 5:16 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI